Mhando dzekubatanidza ➤ kuonekwa kuWorld March Meeting
musha » Noticias » Newsletters » Mhando dzekubatanidza ➤ kuonekwa kuWorld March Meeting
18 / 07 / 2019 08 / 06 / 2019 kubudikidza Antonio Gancedo
Musangano Wekugadzirisa Hwenyika Yose II World March for Peace and Nonviolence
I20 yaApril yeC2019 yaipembererwa nenzira dzinoreva, kushandisa sangano revhidhiyo mavhidhiyo ZOOM kuongorora kwe marudzi ekubatanidza nenyika pamusangano wekutanga we II World March for Peace and Nonviolence.
Zvose zvenyika dzeC44 dzakabatanidzwa munyaya dzekubatanidza uye / kana kutumira mhinduro.
Mhando dzakatevera dzekubatanidza dzakakurukurwa pamusangano:
Mamiriro ezvinhu enyika uye zvakananga mumakendendende.
Zvimwe zvinhu: Web, Telegram, RRSS, nezvimwe.
Musangano wekupedzisira unotevera.
Vatori ve nodes uye / kana kutumira zvinyorwa zve:
Europe: Spain, Germany, Ireland, Belgium, France, Switzerland, Slovenia, Bosnia H, Croatia, Serbia, Greece, Italy neVatican.
Africa: Maroc, Mauritania, Senegal, Gambia, Mali, Benin, Togo, Nigeria, DR Congo.
America: Canada, Mexico, Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Suriname, Brazil, Argentina, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile.
Asia, Oceania neAustralia: Iraq, Japan, Nepal, India, Australia.
Total: 44 nyika.
Chinangwa chinotanga kuita mabasa pakutanga munyika ye75 nemaguta e193.
Zviri mukati chivande
1.1.1 I28 kana 29 yaSeptember: EVA-Espacio Vecinal de Arganzuela
1.1.2 Zvivako zvekugamuchira kweMarches muPaza Mayor kana Plaza España kana Cibeles
1.1.3 Kubvira ku1 kusvika munaOctober 20 (mazuva 20)
1.1.4 Zvimwe zviitiko zvakarongwa
1.2.1 2018. Mharidzo yeWorld March muAs. Vavakidzani veFeáns, C. Civic Library yeMorto Alto, Library yeCastrillón, SeIn Forum Popolis
1.2.2 2019. Mharidzo ye World World pane Os Mallos Civic Center
1.2.3 Mabasa anotevera ezuva rekare
2 Africa: Nyika gumi nembiri - makumi maviri nemana maguta
2.2.1 Gumiguru-2019: Kupfuura kweWorld March kuburikidza neCanary Islands.
2.7 Bhenin neTogo
2.10 Dzimwe nyika dziri muAfrica
2.10.1 Mashoko anotumirwa kunyika dzinotevera
3 America: nyika makumi maviri nematatu - makumi masere nemasere
3.1.1 Kukokwa nemhando dzekubatanidza kwakatumirwa kune vazhinji vezvikamu zvezvipiri muguta.
3.4.1 Tine zvikamu zvakasiyana zvinomiririrwa
3.4.2 Kudzokorora kwemhando dzekubatanidzwa kweMugwagwa weBate Team
3.4.3 Zvisarudzo zvekushandisa mushure memusangano wekusarudzwa
3.6 E Savhadho
3.8 Kosita Rika
3.8.1 Nyaya yemitambo inofarira yeZviri Yechipiri March nehurumende
3.10.1 Barrancabermeja (E. Promoter ari kutungamirira Anthony naMelba)
3.10.2 Medellín (E. Promoter anotarisira Elex naGloria)
3.10.3 Cali-Popayan-Pasto-Cartagena-Tunia-Cucuta-Bucaramanga-Ipiales-Armenia-Neiva (10 cities)
3.11.1 Guayaquil nekuita izvi mumhando dzekubatanidza
3.11.2 Bhokisi rine mabasa aya
3.12.1 Mharidzo kubva kuVenezuela
3.14.1 Mabasa munyika
3.14.2 Mapikicha Anowanikwa Munharaunda
3.14.3 Support support platforms
3.14.4 Central Mabasa
3.14.5 Convergent Routes
3.14.6 Zvimwe Zviitiko
3.14.7 Mafambisirwo Evanhu Nesangano Rinobatanidza uye Rutsigiro
3.14.9 Media and Diffusion
3.14.11 Zviratidzo zvekusatendeseka uye Rugare pane zviyero zvakasiyana
3.14.12 Kuponesa mipiro kuRunyararo uye Kusagadzikana kwakakodzera kunyika
3.14.13 Ipa kuoneka kune kukakavadzana uye zviitiko zvekufarira kune imwe nyika
3.14.14 Mazano akasimba uye nyaya dzinofanira kusimbiswa munyika maererano nezvinodiwa
3.14.15 Economy uye self-financing
3.15.1 Taura nehurumende
3.18.1 Ichava nezviitiko zviviri zvikuru munyika
4 Oceania-Australia-Asia: Nyika nomwe - gumi nematanhatu maguta
4.6 Simba revaKoraas vaviri
4.9.1 Tiri kuronga kuita mabasa aya muNepal
4.9.2 Mabasa eBash Team yeChirungu Chepiri Chipiri munaNeal
4.9.3 The Base Team ichaenda kune rimwe guta kana zvichibvira.
4.9.4 Zvingava zvakanaka chaizvo kana Sudhir naNailesh vose vachibatana muBat Base Team muNepal
4.10.1 Chikumbiro chedu
4.10.3 Pfungwa dzekubatirana pamhando dzekubatanidza dzinofanira kutsanangurwa zvakadzama.
5 Europe: Nyika makumi matatu neshanu - 29 maguta
5.8.3 Imwe inogona kugadziriswa nzira
5.8.5 Mediterranean, Gungwa Rorugare
5.10 Mediterranean: Gungwa Rorugare.
5.11.1 Inoratidziro musangano wakanangana nehondo uye isiri chisimba
5.11.2 Pakupera kwaAugust we2019, pamwe nemamwe mapoka uye ehurumende
5.11.3 Takatumira tsamba yakanyorerwa Munyori weHurumende kuti ataure mhando dzekubatanidza mazano
5.12 Dzimwe nyika dziri kuEurope
6 Zvigadzirwa zvekufambisa mhando dzekubatana kwepasi rese nedzimwe nyaya
6.1.1 Mhando dzemitauro
6.1.2 Tiri kupedzisa chikamu chakashongedzwa chewebhu. Mushure mokunge tapedzisa danho iri tichanyorera nyaya yeRRSS.
6.3 Musangano wekupedzisira unotevera kuti ukurukure mazano anotevera ekubatana kwenyika yose
El TARIRA KUTI 2ª World March iyo 23 kana 24 yaSeptember ichaitirwa muMadrid.
Imba yeChirungu yeChirangaridzo inogona kuva yeCibeles Building kana yeBakery House. Nguva ye12 kusvika 14 (2h).
Kubatsira kutsigira kwechikoro cheBicycle Circuit kutsigira 2ª World March musi we 28 munaSeptember.
(EBA) Vanodzinga 28 / 9 kuvane 11 kubva kuLegazpi uye vanofamba nomunharaunda yeArganzuela, sezvavakaita mune mamwe makore.
I28 kana 29 yaSeptember: EVA-Espacio Vecinal de Arganzuela
Nziyo / tsika / gastronomic zuva nemapoka anobva kumativi akasiyana-siyana enyika (pane maAfrica uye South America mapoka).
Pakati pe 2 uye 8 yaOctober: Vanhu Symbols zvikoro zveSpain. Mushandirapamwe wepasi pose mumaguta makuru nemarudzi akasiyana-siyana ekubatana kwenyika yose
2 yeOctober: Chibvumirano chekufamba kubva kunharaunda kusvika pakati peguta, kutanga pa 16: 00h:
Plaza España - Calle Bailen - Calle Meya - Plaza Meya 1,4 km.
Puerta de Alcalá - Cibeles - Seville - Sol - Calle Meya - Plaza Mayor 1,8 km.
Zvivako zvekugamuchira kweMarches muPaza Mayor kana Plaza España kana Cibeles
18: 30 Reception Mafambiro emunharaunda. Tinoda danho rechiito uye kongani.
19: 30 Chiratidzo cheMunhu weRugare nekusava nemhosva. Nzvimbo yakawanda mukwere.
20: 00 Vhidhiyo-Musha
20: 30 Maitiro emimhanzi nekambani yemakumbo maduku. Mazita anokwanisika emakonti muhutano hwekuonekwa: Kwezvokudya uye mabhuni, Muerdo, Leonor Watling, Rozalén, Ismael Serrano, Jorge Drexler, Chimi, Macaco.
Kubvira ku1 kusvika munaOctober 20 (mazuva 20)
Showroom kuti ipe zvinotevera zvinotevera:
Mapikicha uye mavhidhiyo e "World March".
Mavhidhiyo uye maPikicha e "Vanhu Zviratidzo muMadrid Zvikoro".
Panels dze "Referent of Kwete-mhirizhonga" Gandhi, ML King, Silo…
Mifananidzo yevakadzi vane maDhaimondi maviri: "Maronda", "Tarisa imwe nzira".
Zvimwe zviitiko zvakarongwa
Kutanga kweOCA Game
App ye2ª World March
Chikoro cheChikoro chekuchengetedza zvikoro zveZ2ª World March
Nzvimbo inokwanisika yekuisa chitubu kana chidimbu chekuyeuka kubuda kweChipiri II.
Tinokumbira nzvimbo yeEl Matadero. Inofarira pamusoro pesuo rokumativi, shure kwemukova wePazazpi.
Dai zvaisakwanisika, panzvimbo ye Skating Rink Madrid Río.
2018. Mharidzo yeWorld March muAs. Vavakidzani veFeáns, C. Civic Library yeMorto Alto, Library yeCastrillón, SeIn Forum Popolis
Human Symbol of Peace muChiitiko cheKutipa Rugare uye Kodzero Yokutiza.
Kuparadzirwa kwemabhurocha eNyika asina Hondo pa World March.
Kuongorora kweyodhadhi "Tupac Amaru, chimwe chinhu chiri kuchinja" muBibli. Castrillón.
Documentary "Samba, zita rakarasika" muA. Vecinal Agra.
Kutaura - colloquium pane Nuclear Weapons kuCastrillón Library.
Mharidzo yeMagare Ekusingaperi eAshanda Asingaiti chisimba mumusangano wevamwe vemu Agra. NaRicardo Lucero
2019. Mharidzo ye World World pane Os Mallos Civic Center
Colegio Fernández Latorre (mazana matanhatu evadzidzi uye vavakidzani), Taura - colloquium "Kubuda mumhirizhonga, chinodiwa chega uye chehukama" naPhilippe Moal.
Sangano reHasina-chisimba mubato re Forum Propolis.
Chiratidzo cheMunhu weRunyararo pamwe nekuverenga kweMitemo yekuzvipira Plaza de María Pita (Vadzidzi ve300).
Kubvumirwa kweMasenical Plenary of the Motion to ratify the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.
Sangano reChirungu chisingaiti mu Forum Forum yePolis.
Institutional Declaration yeChishanu Council of A Coruña inonamatira 2ª World March for Runyararo uye Isingaiti chisimba uye ichizivisa October 2 seZuva rekushanda kusina rusununguko muA Coruña.
Mharidzo yeWorld March paShera Academy.
Nhaurirano pamusoro peHasina-chisimba mumusangano wevamwe vemuAgra.
Mabasa anotevera ezuva rekare
26 April 2019 Bhuku revanhu revana veChikoro reKunyararo uye kusasvibisa paZvimbiso pamwe nekubatanidzwa kwe8 dzidzo dzezvikoro uye vadzidzi ve3.500.
May 9: Mharidzo ye World World mu Ventorrillo Neighborhood Association.
6 yaJune: kuungana kwemasangano eguta muSagrada Familia Social Centre.
21 kusvika ku23 yaJune: Mira muKatende yeRugare uye Kodzero Yokutiza, pamwe nemasangano paHasina hutsinye.
September 5: 2ª kudanidzira kukuru kune masangano eguta muCiudad Vieja Civic Center.
October 2: Human Symbol of Peace in the Plaza de María Pita nekushambadzira nekutangira muMadrid kwe2ª World March for Peace and Nonviolence
Chirevo cheMunhu Zviratidzo zveRunyararo mumasangano ezvidzidzo zveguta Máis de 3.500 kuchikoro kubva kuA Coruña vanoita kuti vanhu vatsvake runyararo kuti vatsvake runyararo uye kuti vaite runyararo rwemhirizhonga.
Nzvimbo Yemutero: Chiito chekuonekwa uye kushorwa.
Africa: Nyika gumi nembiri - makumi maviri nemana maguta
Munguva yorwendo rwaMartine kuburikidza nechekumabvazuva kweMorocco uye kuburikidza nemabasa akarongwa nekuda kweMiloud neAzzedine.
Vatsvaga vakagadzwa nemapoka akawanda mukati mehutano hwemhando dzekubatana kwenyika yose, iyo inofanira kutungamirira kune zvigadziro zvezviito (ona mutauriri wakatumirwa mumutsara).
Mumavhiki mashomanana ichava rumwe rwendo rwokuenda kuMorocco.
Gumiguru-2019: Kupfuura kweWorld March kuburikidza neCanary Islands.
Kushandisa mukana wenyika yeChipiri Yenyika Makuru kwakapoteredza pano, tava kukurudzira chii chaizova 1 Canary Forum ye Dzidzo YeRugare.
Inosanganisira kubatanidza nzvimbo dzakawanda dzekudzidzisa uye kuvimbisa kuramba kwavo.
Chido ndechekuti, mune ramangwana, ichava nzvimbo yekusangana yevaya vose vanofarira kukurudzira kuparadzwa kwemarudzi ose echisimba kubva kuchikoro.
3 mitambo yemisangano yakabatanidzwa.
Vari kumirira kutsanangura mabasa ekrete.
MuDakar, Keba DIOP yakabata zvikoro zvitatu uye inoda kuvaunganidza pamwe chete kwezuva reHasina utsinye umo vanoita zviratidzo zvevanhu.
Kuparidzirwa kwakaitwa kune dzimwe dzikoro dzepachivande apo mharidzo iri kugadzirirwa.
Inotsvagawo kukwanisa kwekonti uye chiratidzo chikuru chevanhu cherugare.
Vamwe vatori vechikamu: Ndiaga DIALLO Association Diretti humani, Cheikh DIOP, Samba X Théâtre sensibilisation, Papis BADJI.
Martine yatanga kuparadzira chirongwa kuvadzidzi vaduku.
Vakapinda muhurukuro. Kusarudzira tsanangudzo yemabasa pamhando dzekubatanidza. Mamut Jange
Basa rekutanga kweChishanu World March rakasikwa.
Basa iri rinokosha rakatibvumira kuva nemaonero akajeka ezvinangwa zvatazvigadzirira isu pachedu:
Ronga nhandare yebhola inonzi "NHASI YOKUTI BHUTI RAKANAKA".
Izvi zvichabvumira mapoka eBenin neTogo kurwisana kwemwedzi miviri nekusunungura kwemaviri maviri uye kusimudza ruzivo rwemitemo yekusina chisimba.
Famba zvikoro zvakakwana uye uronga mitambo. Ticharonga matanho ekukwezva vanhu vakawanda.
Sensitize vhidhiyo kuitira kuti vatsaurire nzvimbo yekuparadzira kusina chisimba uye zviito zvinofanira kuitwa kuti dzive nerugare munyika.
Vhura hutambo urwu nebasa rekuita nevanokumbira vanyori uye kugona kwezviratidzo zvorugare zvichava pakati pedu.
Cherechedza: Tinoda kubatana kwenyika yose yeChipiri Yenyika yeKurusi kuti ishandise basa redu mundima kutibatsira kuti tive ne:
Zvinyorwa zvepamutemo zvatingaratidza kana zvakafanira kuitira kuti tisakanganise nzira yedu nekushungurudzika kwehurumende, sezvo nyika dzose dziri mumhirizhonga uye zviremera zvinongopokana zvose.
Tumira tsamba kuhurumende imwe neimwe kutsanangura purojekiti.
Tsvaga midziyo yakakodzera kuti uite rwendo urwu.
Tine mufaro mukuru takave takagamuchira basa iri rakanaka ratinoda kuva rakabudirira.
Tinodawo sangano renyika dzakawanda kushanya kuBenin neTogo.
Tiri kumiririra kuvimbiswa kuzivisa kalendari yezviito zvakasiyana-siyana zvakasarudzwa mukubatanidzwa kwepasi rese.
Chinangwa chinotaura kuti vatauriri vatove vakagadzwa neAfrica National Youth nemamwe masangano kuti pamwe vagadzirire chiitiko muBudja.
Inokumbira rudzi rwehurumende yepamusoro pamhando dzekubatana kwenyika dzakawanda kuti zvibatane nehurumende.
Akatora mukutaura uye akatumira mashoko aya pamusoro peCongo DRC:
MuCongo, hapana rugare rwechokwadi kana hondo chaiye. Ichi ndicho chikonzero chakanaka kune avo vanoda kuvaka hondo.
Ichowo chikonzero chakanaka kwatiri isu vanoda kuvaka rugare.
Nezve 2ª World March, vanhu vanovimbisa kubetsera zvinhu havaiti zvipikirwa zvavo.
Zvisinei, iva nechokwadi chokuti data (yakanyorwa + mifananidzo) inotumirwa nguva dzose mune rimwe guta reLubumbashi.
Tinovimba kuti mamwe maguta eCongo anogona kubatana nesu.
Dzimwe nyika dziri muAfrica
Mashoko anotumirwa kunyika dzinotevera
Mozambique: Mashoko anotumirwa kwavari. Remigio CHIALAUE akabatanidzwa
Kenya: Vakapinda muhurukuro. Vanotumirwa mashoko: Ben Oko
America: nyika makumi maviri nematatu - makumi masere nemasere
Pachave nemusangano we Team Team kuLatin America yenyika yeWorld March mukati mehutano hwemhando dzekubatanidza kunoitwa pano.
Dhigiridzi Weboka: Pablo Acevedo naGabriel Vergara.
MunaMuvhuro we2018 takabatanidzwa seChirungu cheChipiri Chechipiri pamusangano weChechi yeZvamwe.
Iko takaunganidza zvido zve 40 data (40).
Takavatumira ma email akawanda nemashoko uye mumwe munhu akakumbira ruzivo rwepamusoro uye akakurudzira mutambo wepabonde unonzi CONSENSUS nezvekugadzirisa kukakavara.
Takatumira mapepa kumapoka emitambo eguta uye Periscope Theatre yakabvuma kutora chikamu.
Kukokwa nemhando dzekubatanidza kwakatumirwa kune vazhinji vezvikamu zvezvipiri muguta.
Vakatumira maimeri kune masangano akawanda evashure-vekudzidzira vadzidzi kuti vaudze kuti vaudze munhau yavo memo yekukoka kuronga mabasa ekufambisa kwekufamba.
Vakabatanidzwa mukufambisa kweZuva reNyika pamwe neshoko rokuti kusina chisimba kune zvezvemamiriro ehupenyu: pasina hondo hapana kusvibisa zvombo.
Vakagovera mapurisa pakati pevamwe vatori vechikamu.
Dhidhiyo yakasunungurwa iri kurongeka kuti inokumbira nzvimbo uye kukoka kuronga mabasa ekufambisa kwekufamba.
Musi woMugovera, 27 / 4 ichapindazve kune Primavera de los Alternativas chiitiko kuti utsvake vatengi.
N. York, Los Angeles. Mashoko akaendeswa
Tribute to M. Luther King Washington. Hélène Park.
Kugamuchirwa kweSouth General yeUUN muN. York.
Chiitiko pane "Kubvumidzwa kweUnited Nations".
Chiitiko pamuganhu weU.S. Ngirozi Border yakabatanidzwa mumitambo yakasiyana-siyana.
Mutero kuChipatano cheTlatelolco.
Guta, Antigua, Esquipulas. Mixco,
EP Alberto Vásquez Kurongeka.
Zvichipa kuti Guatemala iri musarudzo dzakawanda mumwedzi waJune.
Zvimwe zviito zvakaronga pakugadzirira.
Pane nharo pakati pezvematongerwo enyika, akadai seSupreme Electoral Tribunal neDare reMitemo reMitemo uye Dare reMatongerwo enyika pazvinyoreswa zvevadzidzi vanobatanidzwa kumapoka ekutengesa zvinodhaka.
Zvose izvi hazvibatsiri kuita zvisingatauriki mukugadzirira kwe2ª World March for Runyararo uye Isingaiti Chisimba munyika.
Kubatanidzwa kweMusangano Wekusimudzira kuMusi weKunyararo uye Usingaregi.
Kubatana pakati pevanhu nemasangano zvakasimudzirwa pamhando dzekubatanidza kusimbisa boka rinokurudzira.
Tine zvikamu zvakasiyana zvinomiririrwa
Sangano Rezvematongerwe Enyika, DiverArte, Misangano inobatana neKutaurirana Kwemunharaunda.
Uyewo, Masangano Evadzidzi, uye muNational University, Estudiantina weYunivhesiti yeSan Carlos yeGuatemala, Masisita akaita seMuguta weManganco.
Kudzokorora kwemhando dzekubatanidzwa kweMugwagwa weBate Team
Kushanyira kuDhipatimendi reQuetzaltenango (200 km kubva muguta guru) reactivating contacts kuti vaone kutenderera kweBato Team mune uyu masipala.
MuMasipala weChiquimula, vatauriri vanodzorerwa zvakare kuti vadzosezve zviito, vatore zvakare, semuenzaniso Chikumbaridzo ku World March, yakavakwa pamusuo waMasipala.
Nzvimbo iyo boka rechechi raizoparadzanisa kuenda kuSanta Rosa deCopan Honduras uye La Paz, kuEl Salvador.
Zvisarudzo zvekushandisa mushure memusangano wekusarudzwa
Zviitiko muzvikoro zvekudzidzisa, Zviratidzo zveRugare.
Masangano, kuongorora nekukurukurirana.
Regional Forum yakarongwa naDiverArte.
Kubatanidzwa nekudzokororwa kwemagwaro.
Kuzivikanwa kwekutanga kwemurairo inopiwa neGuriti reGuatemala kuratidza Nuclear Weapons Prohibition Treaty.
Kudzidziswa kwechikoro 60 iyo inotungamirira kuvaka kwechiratidzo chekune rugare, nevana kubva kuchikoro mumucheto weHonduras neGuatemala, pavanogamuchira 2ª World March.
Kushamwaridzana kwevadzidzi vezvokurapa weyunivhesiti yenyika UNAH uye maunivhesiti maviri ega ega ari kuronga kufambiswa kwe2ª World March, mukushanya kwayo kweCentral America.
Masunharaunda eOmoa neSan Pedro Sula, anosarudza kupindira mu 2ª World March, nechisimba chikuru chevanhu.
Kutungamirira misangano mitatu yakadaro panguva imwechete kuSunivhesiti yeSan Pedro Sula pane nyaya dzine chokuita nerunyararo rwepasi rose.
Leon, Managua. Vari kugamuchira ruzivo.
San José, San Pedro de Montes de Oca, Liberia neHeredia.
Misangano inoshanda muCentral Promoter Team: Kuchinja muViolent Times Foundation, Friends for Peace Centre.
Uye ivo vakawedzerwa, Chisimba Chikudzivirira Chikwata cheMapolisa Mapoka Emapurisa PAIN-V mune 11 Zvikoro uye Colleges (kusvika ikozvino).
Masangano eVadzidzisi neVadzidzi.
Mabasa ekuita uye zviratidzo zvevanhu paZuva reMarudzi Rorugare 21 / 9.
Mhemberero yezuva 2 / 10 yekusina chisimba uye kubva kweNyika Yechipiri March.
Nyaya yemitambo inofarira yeZviri Yechipiri March nehurumende
Mabasa Pakati pekufambisa kweZviri Yenyika March.
International Forum pane "Basa remauto muzana XXI". (Kumirira kubvumirwa nehurumende).
Mabasa ane 1000 vana mu esplanade yevana Vana Museum. (Mukugadzirira).
Chikamu cheRugare muParque de la Democracia. (Mukugadzirira).
Zviratidzo zvevanhu pamwe nevadzidzi, mumitambo yakasiyana-siyana yezvidzidzo nemapaki mune mamwe maguta. (Mukugadzirira).
Kubatanidzwa mune mapurogiramu akawanda uye hurukuro yekukurukurirana, Radio neTV. (Mukugadzirira).
Kugadziriswa kwe EPP uye misangano kwemahombekombe maviri neChitatu muCAP kubva ku5p.m.
MuPanama, Nyika Isina Hondo uye Pasina Chisimba nhoroondo Belkis de Gracia mugore rapera rakabata musangano kuIntamerican University of Panama.
Pakati pekupera kwaSeptember uye kutanga kwaOctober wegore rino, tichaita musangano muyunivhesiti yemo (nzvimbo, zuva uye nguva yekusimbiswa).
Vatauri vanokokwa kuti vatore chikamu muhurukuro: "Tsika Yorunyararo, Isiri mhirizhonga, kuremekedza vana uye zvakasikwa kune Panama iri nani", mukati megadziriro ye II World March yerunyararo uye Isiri mhirizhonga. Ivo vachakwanisa kugovana nesu ruzivo nezve iko kumberi uye neruzivo rwavanofunga rwakakodzera nezve izvo zvakaitwa nehumanism uye zvimwe zvinopihwa zvine chekuita nemhando dzekubatana.
Ramba uchishanda pamwe nezvikoro zve40 zvakatsigira muSouth America March. Masangano anoshanda asingasviki, murals, mifananidzo inotsanangura kumusoro wepamusoro, yakamutsa mureza, nyaya uye zvinyorwa, zviratidzo zvekugarisa munharaunda uye marwendo.
Chiratidzo cheugare chichagadzirirwa muPaza de Bolívar ichikoka vanhu 5000.
Kuziva kwekambani huru yorugare uye isiri chisimba.
Barrancabermeja (E. Promoter ari kutungamirira Anthony naMelba)
Musangano kuUnipaz (Yunivhesiti) uye SENA.
Kuramba-famba uchifamba muguta uchiunganidza 2000 vanhu.
Kukurukurirana kuchaitwa nehurumende dzekodzero dzevanhu dzavakashanda nadzo mumutambo wokutanga uye dzichivhara ne chiratidzo chikuru cherugare.
Kumbira nhengo yeBataki Team kuti vatore muB / ca pamusangano uye chiratidzo.
Zvakakosha kusimbisa mazuva.
Medellín (E. Anosimudzira anotarisira Elex naGloria)
Carnival yemutsika: dzose dzemakomini dzinoenda kuMedellín mukuenzanisa nekufamba kunopfuurira muguta.
Anotaura paunivhesiti nezvehukama uye kwete chisimba.
Taura nehurumende yehurumende, inotarisirwa neHuman Rights uye yakabatana.
Cali-Popayan-Pasto-Cartagena-Tunia-Cucuta-Bucaramanga-Ipiales-Armenia-Neiva (10 cities)
Mavari, kufamba uye zviratidzo zvorugare zvichaitwa muguta rimwe nerimwe.
Anotaura pamusoro pezvisiri zvechisimba mumayunivhesiti uye masangano.
MuBarrancabermeja, iri kurongwa kuitira kuti mumwe kana vanhu vaviri veEB vabatane navo mumabasa eguta uye muKolibri Park.
Andrés Salazar naMarly Arévalo vanoda kuzviratidza sechikamu cheEB chinobva kuMadrid-Spain.
Tichagadzira maT-shirts, mireza, zvikwangwani, tsamba kumasangano, kumayunivhesiti uye makoreji uye chii chakakosha kuparadzira Second World Kurume.
Kune hukama nehurumende dzehurumende, Kodzero dzevanhu, nheyo uye masangano anowirirana nechishuvo chakafanana cherugare uye kushingaira kusina chisimba.
Nezvekukwanisa kwekugamuchira iyo Base Team yeWorld March kune 2 maguta.
Guayaquil nekuita izvi mumhando dzekubatanidza
Vyunivhesiti: U. de Guayaquil naU. Casa Grande.
Kupikisana kwemauto emitambo yevechidiki.
Zvimwe Zvikoro uye kuMuguta weGuayaquil.
Bhokisi rine mabasa aya
Yakarongedzwa nePan-American Roundtable.
Ecuador-Manta: Kugamuchirwa kuguta reManta-Ecuador nokuda kwekuvharwa kwemauto ehondo.
Mharidzo kubva kuVenezuela
Ikoko muVenezuela, kutaurirana, zvose nefoni uye paIndaneti, kazhinji, zvinobva kune chigandanga chechibvumbi, chisina kunyatsogadzikana.
"Ini somuenzaniso"Pindura mutariri wedu,"Ndine vhiki mbiri pasina kutaura kwemafoni, kana WhatsApp. Uye vanhu vazhinji".
Chero mamiriro ezvinhu, isu tiri kumirira, kunyange zvazvo tisina kuita zvakawanda. Kune ruzha rukuru nehurumende yenyika uye yezvematongerwo enyika nyaya.
Paramaribo Vari kugamuchira ruzivo.
Recife, Minas, São Paulo, Cubatão uye Caucaia.
Mubatsiri weboka: Gunther A., ​​Marcos R., Jobana M., Régis M., Rosana B. naVinícius P., Rosana B. naFernando P.
Takaongorora kuti kufamba kwekutanga kwakakonzera zvakanyanya mhizha, nheyo huru muBahia nePernambuco.
Vazhinji vanopfuura 3 vanhu vane zviuru zvakasangana nehutachiona uye hutano hwemagariro evanhu panguva iyoyo.
Vakawanda vevanyori ava vari kugadziriswa sezvo South South inofamba mu2018.
Nokuda kwekufambisa kwechipiri tichaisa basa rekutanga nemararamiro ehukama muzvikoro uye zviitiko uye maforamu ekusaremekedza.
Mapikicha Anowanikwa Munharaunda
Kusvika pari zvino tine vatsigiri veScotton World World mumaguta e2.
Mabasa anosimbiswa muRife, Minas, São Paulo, Cubatão neCaucaia.
Havati vasimbiswa muRio.
Zvinogonawo kuti Curitiba neRio Grande do Sul vane mabasa.
Support support platforms
We vanotsigira uye kuzvipira magwanza of Cultural Center yeSão Paulo, pakati UMAPAZ (Universidade Livre kuita Meio Ambiente E Da Paz) uye Education vanyori pakati Cotia uye Pernambuco mabasa muna dzokurovedza muviri uye zvikoro.
Masangano akasiyana-siyana vari kutaurirana, akadai se: Zvikoro, Vunivhesiti uye Vanyori veZedzidzo.
Guta roga roga richave nerinzvimbo yakasiyana.
Izvi zvinoda kujekeswa muguta rimwe nerimwe.
In San Paulo aitaura kuita chiitiko panguva Cultural Center uye Cubatão chiratidzo chorugare pamwe 300 alumnos.La nechepakati nzira Nampula kuti vanofungidzirwa 03 07 zuva December, Sao Paulo 8 11 kuti / Dec., Paraisópolis / 12 14 kuna Minas mazuva / Dec., 15 kuna 18 Caucaia / dic.Este vanoedza kutanga purogiramu anofanira kuchinja, unogona kushandura maguta, nzvimbo, mazuva uye nguva.
Tiri kuronga kuita mapoka evadzidzi anoguma nezviratidzo zvekugara muzvikoro, magyamu kana mashoma ematambo ematambo.
Kubva October 2 tichaita zvamaronga marudzi vanoverengeka Kufambisa vanoverengeka zvemitambo, magariro uye masangano ezvitendero asati kutanga kuita mabasa okupedzisira chikwata yakavakirwa, uye, apo pazvinobvira, anosanganisira converging pakutengeserana.
MuSão Paulo dzimwe nhume dzakanga dzine chimiro chekuita chiratidziro uye musangano ku Umapaz.
Pressenza uye 4V urongwa kuita akatevedzana pfupi mavhidhiyo uye zvirongwa kuparadzira uye vhiki mberi mushumo Convergence netsika marcha.La anoronga kuita tsika zviitiko nevakadzi mubvakure, nenziyo uye / kana simba kuvapo muna March of Inmigrantes.En Nampula okudhindira uye ekudzidzisa kuti vadzidzi nevadzidzisi vachaitwa pachena REDE.
Institutional support: Kusvikira ikozvino, yakanyanya kunyanya kune vanofambidzana nevadzidzisi vezvidzidzo, makamuri emaguta nemayunivhesiti.
Mafambisirwo Evanhu Nesangano Rinobatanidza uye Rutsigiro
Tiri kusangana nemasangano nekufambisa kwakatsigira 1ª World March muBrazil, zvakadai sePólis Institute, Sou da Paz, Soka Gakkai, Unipaz nevamwe vakawanda.
Vamwe vavo vakatotanga kuita mabasa eSouth America March akaitwa mu2018.
Hatisati tine nguva yekuongorora nyaya idzi, asi isu tine nzvimbo dzakasimba uye mifananidzo ye 4V iyo inogona kuvhara zviitiko, nekutapurirwa kweupenyu kune vamwe vavo.
Media and Diffusion
Tine mazita zvenhau kutumira venhau zvabudiswa, 6 kana 7 kukurukura nhau vadiwa, asi kuchine kuumba chikwata vanyori kuti muchisviniro zvabudiswa uye ndichavatuma imwe maitikiro.
Tichava nekunyora kwaPressenza mune SP uye chidzidzo che 4V sekutsigira kutsigira zvinhu zvekugadzirisa pamhando dzekubatanidza
Zvakakosha kudzorerazve mazamu e2ªMarcha Mundial Facebook, Twitter, Instagram, web, telegram, nezvimwe.
Zviratidzo zvekusatendeseka uye Rugare pane zviyero zvakasiyana
Parizvino pane maguta maviri anongoda kuita izvi: Cubatão e Cotia.
Tiri kutarisana nedzimwe zvikoro uye isu tinoda kujekesa zvinhu muchiPutukezi.
Kuponesa mipiro kuRunyararo uye Kusagadzikana kwakakodzera kunyika
Pakutanga taive tichichinjana pamusoro pemipiro yaPauro Freire, Maria da Penha, Augusto Boal, Chico Mendes naMarielle Franco.
Ipa kuoneka kune kukakavadzana uye zviitiko zvekufarira kune imwe nyika
Parizvino muBrazil vane kwazvo simba nyaya mhirizhonga mapurisa uye zvinodhaka hondo, kuzviruramisa kupindira mune murombo munharaunda uye udzvanyiriri pamusoro Kuratidzira dzavo, vakawanda mujeri, decontrol chausingazopi maoko, nevanhukadzi mhirizhonga, kukura ndinovenga kutaura, kuvharirwa kana kusunga enyika kurovedzera uye vavengi hurumende uye kuuraya vanhu dzevatema arikunze uye zvemo mumunda.
Mazano akasimba uye nyaya dzinofanira kusimbiswa munyika maererano nezvinodiwa
Rudo Ruchakunda Ruvengo.
Economy uye self-financing
Hatisati tave nekukwanise kudonongodza bhajeti yeMarch munaBrazil, tichazotanga kuita ikozvino muna May.
Takataura pamusoro pemushandirapamwe wevanhu vakawanda.
Matambudziko, zviito kana kukakavadzana kunogona kuwedzera kana kuva nemigumisiro kune imwe nzvimbo kana yepasi rose: Kubatana kweBrazil neIsrael, kutenga zvombo.
Uye kuendeswa kwemauto eAlcantara kune USA.
Tumbes, Piura, Lambayeque (vanhu vanobva Chachapoyas uye Yurimaguas vanosvika), Trujillo, Huaraz, Lima, (15 maguta).
Bhuku Rokukurudzira rePeru rinoumbwa naCarlos Degregori, Luis Mora, Mariela Lerzundi naRiccardo Marinai.
Nzira yeEB ichava nzira yemaguta ose. Inogona kugoverwa mumapoka akawanda.
Makanzuru (Magdalena, Surco, Miraflores), Ministry of Education Cañete (mapoka 300 zvikoro), College of Nyanzvi dzezvokushanda kwepfungwa kuPeru, vaikurudzira vachikudza Cities, Africa (Ricardo Palma: Casa the Cultura Korihuasi, National U. Toribio Rodriguez of Mendoza, U. César WASHINGTON DC) Chikoro Tourism of National University of Tumbes, Piura Task Group, Regional Hurumende Lambayeque, Regional Office of Education pakati Arequipa, Humanist Vanamuzvinadzidzo Network Group Culture Yurimaguas.
Zvinhu: Mukubudirira: matanda, mabhanhire, mabhanhire, ribhoni, zvinyorwa, mabhurocha, mapepa, mapepa.
chitsamba: Tine vatsigiri muguta rimwe nerimwe. Tiri kuronga mhando dzakasiyana dzekubatanidza kukurudzira mabasa pane imwe nheyo. Tine nzvimbo inokosha muLima, inowanikwa neRicardo Palma University.
Mabasa aya ainyanya kugadziriswa nekudhinda uye kutumira tsamba yekukoka kune zvikoro zvepachikoro uye zvepuraimari munzvimbo yeSopocachi yeLa Paz. Kutanga muna July, masangano achaitirwa vadzidzisi nevadzidzi vanobva munzvimbo imwe chete.
Tsanangudzo yemabasa anoitwa haisati yawanikwa.
Siri Yokudzidza Center yakatanga nekuparadzirwa kwemabasa eNyika March. ivo vanotanga mabasa ekuparidzira muna July.
Icho chiri muchikwata chekutanga chesangano, nevanokurudzira mumapurovhinzi e8: Salta, munguva ichangopfuura muCABA (Autonomous City of Bs. As.)
Kupararira mabasa muParque Lezama, Province of Buenos Aires uye muCABA; Zvose ndezvekuita zvekubatana uye kutsvaga kutsvaga.
Ichava nezviitiko zviviri zvikuru munyika
Kuzivikanwa kwaamai na vanasekuru vePaza de Mayo sekutaridzirwa kwehondo isingaiti.
Tribute to Silo. Zvose mukutonga
Isu tatove neChirongwa cheUsangano weZedzidzo muCórdoba uye kuziviswa kwechido cheSepislature yepurogiramu inoshandiswa.
Chiito chidiki chakarongerwa kuendeswa kwebhuku reSouth American Kurume, kuMilagros Sala muJujuy.
Takataurirana nemakomishinari eCuba, Venezuela neBolivia muBuenos Aires, uye takabatanidzwa mumabasa ekubatana nevanhu veVenezuelan muCordoba.
Kuonana-Kuzivikanwa kuna Amai nekurukuru veMay muArgentina.
Homage kuna Mario R. Cobos - Silo nekuda kwake mupiro kuNhasi-chisimba.
P. de Vacas: 2 / 1 / 2020 Mhemberero yeC10º yemakore ye 1ª World March.
Vanotanga kuita misangano pamusoro pemhando dzekubatana.
Vanofarira nzira yekukura nevanhu vatsva vanobatanidzwa mumabasa.
Vanoronga kutarisa nzvimbo dzose dzeChile kuti dzikurudzire nyaya iyi yekusimudzira mapoka evanhu.
Vachatsigira nekugadzirwa kwezvinhu zvemarudzi ose anofukidza mhando dzesangano nezviito.
Pfungwa iyi ndeyokubatanidza vanhu kuti vave nekukwanisa kuenderera mberi kune World March muzvinyorwa zvinotevera.
Uyewo muChile, kusimudzira rubatsiro rwe TPAN (Chibvumirano cheMutemo weNyuchi Weapons) chakatove chave chave chavepo neparamende, ikozvino ichichiendesa kumapurisa.
Vachaita neboka reasayendisiti vanoita mapurogiramu ekutsvakurudza.
Oceania-Australia-Asia: Nyika nomwe - gumi nematanhatu maguta
Dzokorora zvakare nevatengi ve1ª World March.
Kuzivikanwa kweNew Zealand senyika yezvombo zvenyukireya.
Mhemberero dze 10º Anniversary ye 1ª World March.
Sydney: Basa riri kuitika mukuronga musangano pamusoro peWM kuSydney.
Kufunga nezvekugona kuita chimwe chinhu pamahombekombe paWM kupfuura, sezvakaita IWM. Mutongi ndiye anokonzera Wekupikira.
Tichadzokorora zvakare nevatumwa ve1ª World March
Naileh akaenda kuJapan uye akaita kuti vamwe vanyori vepunivhesiti vaite.
Ivo vari kuedzawo kushamwaridzana nevatungamiri veMeya yeKunyarara, ICAN uye yeZ1ª World March.
Mutero kune avo vakaurayiwa muHiroshima neNagasaki muJapan.
Tinofanira kubvumirana zvakare nevatauri ve1ª World March.
Simba revaKoraas vaviri
Tinofanira kubvumirana zvakare nevatumwa ve1ª World March.
Chiitiko pamuganhu weSouth neNorth Korea.
Iye achakurukura newe. Zvinonakidza kuti 2ª World March inopfuura neChina.
Pane chinangwa chekubatana nevaya vakapinda mu 1ª World March
Tulsi Sigdel naKabir Ranjit basa sevatungamiri. Pamwe ne3 Nepali zhinji ichava muMadrid the 2 yeOctober 2019.
Magaj Bd Panthi uye Sharada Prashad Dhital vanoda kuita Madrid kuAfrica route seEB.
Vari kuronga pakati peNepalese 5 ne10 kuenda kuMadrid pakuguma kwe World March pane 8 / 3 / 2020.
MuNepal tava kuzoronga National Humanist Forum.
Tiri kushanda purogiramu yeChipiri yeChirungu yezvikoro, zvunivhesiti nemasangano kuti vatore chikamu.
Tinoona mhinduro yakanaka inobvira zvichienderana nemhando dzekubatanidza kunorongwa.
Tiri kuronga kuita mabasa aya muNepal
Zvikoro zveYunivhesiti mumasangano eK Kathmandu, Banepa, Panauti, Biratnagar.
Pachave nekukurukurirana pakati pechikoro muK Kathmandu neKavre.
Humanist Forum (pakati pezvikwata zve50 zvakasarudza nehanya newe).
Taura pamberi pemwedzi we1 mabasa echechi yepasi muNeal.
Periodic update ye Second Second March mabasa muNational News pepanhau nemabhuku mazuva ose e15.
Bhurocha uye Bhani reMusika March muNepali neChirungu.
Mabasa eBash Team yeChirungu Chepiri Chipiri munaNeal
Zuva 1 - Base Team inosvika muNepal. Kukurukura kunodzidzisa uye kuzorora.
Zuva 2 - World Kurume muPanauti, 9:00 kusvika 11:00, masikati, kubva 1:00 kusvika 3:00 musangano muhoro kwemupurazi reBanepa. (Dzokera kuKathmandu)
The Base Team ichaenda kune rimwe guta kana zvichibvira.
Tinotarisira kuti tione mararamiro kuBiratnagar uye zvimwe zvingaitika mumaguta akaita saBhaktapur neKirtipur.
Zuva rechitatu - World marichi paKathamandu City Hall kana National Stadium.
Vanotarisira 500 kune 700 vanhu vanobva kumasangano ose (chikoro, yunivhesiti nemasangano).
Zuva rechina - National Conference (une mukana wekuti uve muLumbini uine zvipo kubva kumanyorero epasi).
Tichadzidza kubvira kwekufamba mumusasa weSagarmatha (Everest).
uye Zuva re5 - Enderera rwendo kuenda N. Delhi-India.
Zvingava zvakanaka chaizvo kana Sudhir naNailesh vose vachibatana muBat Base Team muNepal
Uyewo kubva kuNepal tinenge tichida kushamwaridzana neBat Team muIndia.
Isu tinoda kugovera pokugara uye zvokudya nekutakura kwevamwe veBat Team.
Tulsi Sigdel / Kabir Ranjit vatungamiri veNepal
Takatanga basa racho nekuita chiratidzo chekugara mune imwe chikoro muKannur nemazana evadzidzi, uye vadzidzisi veye chikoro vakapindawo.
Denderedzwa rakafambiswa pamwe nerwiyo "Tichakunda ..." rwakaimbwa neboka revadzidzi.
Isu tinoshandura zvinyorwa zvedu zviri pamutemo 'Mutauro weMalayalam'. Ndakaita mavara edhisheni ebhuku iri.
Chimwe chinhu chinokosha chaive Chechi yePromoter munharaunda yeJannie. Kubatanidzwa kwaive kwakanaka uye kunofadza.
Akatora mumisangano yose yemarudzi akawanda pamhando dzekubatanidza.
Rega mutauro wedu "chiMalayalam" uonekwe pane yepasi rose saiti.
Kuti zvinhu zvedu nezviitiko zvinogona kutakurwa pawebsite.
Tichabatana nezvikoro uye makoroji. Shamwari dzeNSS 15,000 dzichabatana ne2WM (Misangano yakafuridzirwa naGandhi nevanhu vanobva kumasangano ezvitendero).
Contact yakagadzirwa kubva kuMumbai neEkta Parishad.
Ekta Parishad. Sezvo Mhando dzakawanda Kufambisa the World March 2ª ari kuonana Ekta Parishad uye musangano ari kufora Jai ​​Jagat.
Tine chibvumirano chemhando dzekubatirana. Vachatsigira 2 World March munzira yayo kuburikidza neIndia uye tichavatsigira muEurope.
Pfungwa dzekubatirana pamhando dzekubatanidza dzinofanira kutsanangurwa zvakadzama.
Chiitiko muNew Delhi ye30 / 1 / 2020: chiitiko chekufa kweGandhi.
Europe: Nyika makumi matatu neshanu - 29 maguta
Munich uye Berlin.
MunaFebruary Sandro akaenda ku "Friedenkonferenz" muMunich kuzivisa iyo 2nd World March uye tiri kuronga chiitiko chakakurumbira muMunich muna Chivabvu 23th kuyedza kuzivisa iyo 2nd World March zvakare.
Pfungwa iripo ndeyekuti Nyika yechipiri Kurume inowirirana ne "Friedenskonferenz", musi waFebruary 14.
Zviitiko muGermany zvinogona kuva pakati pe12 uye 14 munaFebruary.
Unogona kuwana 12 kuna Berlin, ipapo ramba Leipzig (?) Kana Frankfurt (?) Uye 14 kuna Munich. Sandro, Monica naHarald ndivo vari kufamba kubva kuMunich.
Vanotsvaka avo vanogona kushanda muBerlin.
Tinoda kuziva kana paizove nemakwikwi neWILPF kana ICAN muGermany.
Tine chinangwa chekuumba boka revanhu vane 20 avo muGermany vanogona kugadzira nekugadzirira zviitiko.
Isa mazita e7 mazita akaunganidzwa panguva yeFriedenskonferenz:
Iwe unofanirwa kushandura nhamba.
Mashoko ari kutumirwa pamhando dzekubatana.
Kushanya kuParamende yeEurope.
Mutero kune avo vakaurayiwa mu Ypres Makaburiro.
MuBordeaux, ACDN pamwe chete (Citizen Action for Nuclear Disarmament) inofarira kupinda muchirongwa.
Mushure memubatanidzwa waRafa mumusangano we Jai Jagat Europe, muLyon, shamwari dzakanaka dzakatangwa neMUN (Mouvement pour un Alternative Nonviolente).
Iko kune, muNice, vanoenderera mberi nevatauri nemapoka akawanda kuti varonge mharidzo.
MuIvry sur Seine, munharaunda yeParis, inoramba ichitaura nemasisita.
Izvo basa reMusangano weSiro "Gravis ton sommet"Kubva kuToulouse, inofungidzira kuverengerwa munaKurume, pamwe nevamwe zana vanogadzira dzidzo inofadza uye Femmes Internationales, mur brisé (FIMB) kushamwaridzana neine network.
Geneva Mashoko ari kutumirwa pamhando dzekubatana. Iko kune vanobatana naJai Jagat Switzerland.
MuAtene pane musangano wekutanga we2 World March ne50 vanhu.
Vari kushandura bhurocha muchiGiriki.
Maguta eTesteste, Vicenza, Brescia, Alto Verbano - Varese, Milan, Turin, Genoa, Ventimiglia, Florence, Perugia-Assisi, Livorno, Roma, Cagliari, Avellino, Naples, Reggio Calabria, Palermo anotora chikamu.
Tichaedza kuvhara maguta e1 World March uye vamwe.
We zvamaronga rakatsemuka kuva mativi maviri Eb achiuya Italy kuna Trieste 26 / 2 / 2020 (Trieste riri renyukireya chiteshi pedo mujinga Aviano Air Force zvombo zvenyukireya 40)
Anotanga muTesteste - Vicenza (US mauto makuru Ederle uye AFRICOM) - Brescia (padhuze neGhedi Air Force Base ine zvombo makumi maviri) - Alto Verbano - Varese - Milan - Turin-Genoa (kubuda Italy 20/3/3 kuenda Ventimiglia-Niza)
Inotanga muTesteste - Florence - Perugia - Assisi - Livorno (chiteshi chenyukireya, padyo nedzimbahwe remauto eU.S. Camp Darby) - Roma - Cagliari (iro hombe rehondo rinopfura muEurope) - Avellino-Naples (chiteshi chenyukireya, Joint Force Command kubva kuNATO) - Reggio Calabria - Palermo (kubva 3/3/2020 akananga kuBarcelona).
Imwe inogona kugadziriswa nzira
Puglia - Brindisi (chiteshi chenyukireya) kuMiddle East (Rebhanoni) - Kupro (nzvimbo inokwanisika paGreen Line) - Izvo zviri kutariswa kuti aenderere mberi kuGreece neBalkan kwaanosangana neWorld Base Team muRijeka (Croatia), Capital. Tsika dzeEurope 2020 kana kujoina Spain.
Tiri kuedza kugovera kubva kuItaly kuti tiwane vatori vechikwata cheBato reBatanidzwa kuitira kuti tivhare nzira yakarongwa kunyanya zvachose (uye kwete chete).
Mediterranean, Gungwa Rorugare
Muhurongwa hweWenyika yechipiri Kurume tiri kusimudzira mushandirapamwe we "Gungwa reRunyararo".
Pakazopera October, chikepe achabaya kuGenoa uye Nice, Barcelona, ​​Tunis, Palermo, Reggio kuCalabria, Cagliari, Livorno uye zviitiko zvichabviswa kurongwa munyika Museums yeGungwa mumaguta akasiyana.
Misangano yave ichiitwa neChinyorwa cheHurumende yeVatican inotarisana nezvirevo zvitatu kurutivi rwedu:
Mediterranean: Gungwa Rorugare.
Iyo Rwendo rweRunyararo rweWestern Mediterranean inopera muGenoa iyo ichapfuura Civitavecchia kuenda kuVictoria (kana nzvimbo dzayo kuRoma) chiratidziro "Ruva rekunaka kwegungwa", mufananidzo wekutora mifananidzo pamhepo iri pasi pegungwa reMedithera.
Chiratidziro chako chichava mukana wekuenzanidza musangano pane zvehupenyu hweMediterranean.
Ichava chiitiko kubva pamagumo eOctober kusvika kutanga kwaNovember ye2019.
Panove nekukwazisa boka revanhu kubva kuBat Team iyo inofamba nyika uye zvinokwanisika kuona chiratidzo chevanhu chekugarisana uye chisina chisimba nevechidiki vanobva munzvimbo dzakasiyana-siyana.
Nekuvapo kwemajeri, mune zviduku zviduku zvinotora. Zuva rinotarisirwa: kuguma kwaFebruary / 2020.
Inoratidziro musangano wakanangana nehondo uye isiri chisimba
Second World March parwendo rwavo vanowana zvakasiyana yokunyika uye zvechitendero chaizvoizvo, achiunganidza zvakaitika, Zvipupuriro vanhu vaizosangana muchirimo 2020 muna Vatican.
Iyo inogona kuva mukana wekuziva iyo iyo nhamba dzekutaura pamusoro pekusingaiti chisimba vasingateereri mumwe nomumwe kana kusazvidza rutivi rwavo rusina chisimba, saJesu.
Pakupera kwaAugust we2019, pamwe nemamwe mapoka uye ehurumende
Unogona kusika nguva kugamuchirwa naBaba Vatsvene (Pope Francis), uyo vachasangana naye munyika nhume (munotinyima) izvo zvinogona kupa shoko nokuti rwendo.
Takatumira tsamba yakanyorerwa Munyori weHurumende kuti ataure mhando dzekubatanidza mazano
Musangano Wepasi Pose pamusoro pekusina chisimba uye chitendero.
Madrid 6 / 3 Chikamu chekugamuchira.
Madrid 7 / 3 Kuniki yekuvhara kweZviri Yechipiri March.
Uye Madrid 8 / 3 inobatana nekuratidzwa kweZuva reZimbabwe Women's 8 / 3.
Zvinotarisirwa kuyananidza zvakare, ruzivo rwakatumirwa kana kuti ruwani shamwari mu nyika dzinotevera:
Dzimwe nyika dziri kuEurope
Kugadziriswa Finland, Sweden, Denmark, Poland, Czech Republic, Romania, Austria, Luxembourg
Zvigadzirwa zvekufambisa mhando dzekubatana kwepasi rese nedzimwe nyaya
Takatotanga kushanda webhusaiti https://theworldmarch.org
Nezvemitauro, tinokumbira kuti tiongorore huwandu hwekushandurwa kunoitwa mumitauro yakasiyana.
Pano pane mukana wekuti zvibhuku zvakakosha zviri pawebhu uye shanduro dzezvesayenzi dzinofanira kuitwa mumutauro umwe neumwe.
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian.
ChiCatalan, Cebuano, Chichewa, ChiChina (Chinyorwa), Chinese (Traditional), Korean, Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch.
Chirungu, Esperanto, Estonian, Euskera.
Haiti Creole, Hausa, Hawaiian, ChiHebheru, Hindi, Hmong, Hungarian.
Uye rinopfuurira richiti:
Samoan, Scottish Gaelic, chiSerbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sudanese, Swahili, Swedish.
Tiri kupedzisa chikamu chakashongedzwa chewebhu. Mushure mokunge tapedzisa danho iri tichanyorera nyaya yeRRSS.
Zvidzidzo zvichange zvakagadzirirwa kune avo vanobatsirana pakuisa mashoko.
Nyobhu yakagadzirwa kuitira kuti zvikamu zvigone kuvimbiswa nenyika, kusanganisira maguta nokudaro kushandura marudzi ekubatanidza munzvimbo dzakasiyana.
Tine chikwata chekutsigira kereke uye zvinyorwa zvewebhu. Tinokoka masangano anofarira kutora chikamu.
Tine chinangwa chekuvashandura uye kuita kuti vawedzere simba.
Tine 4 chiteshi chemashoko kubva kuMusi Wenyika Yechipiri March paTeregram kuzivisa.
Pane zvinhu zvinokosha chete uye nhoroondo yezvinhu zvose zvakaitika kubvira pakutanga zvinochengetwa, zvakare zvinowanikwa kune vatsva vanobatana nezera.
Vachava nevatungamiri vakawanda pamutauro.
Tinokurudzira kuumba boka kukondinendi kune ruzivo rwekukurumidza uye rwazvino (semuenzaniso. Vakatoshanda muEurope uye muSouth American Kurume).
anoperekedza kushandisa boka achapiwa wakavhomorwa nokuda operative uye kutsvaka kuti haisi kuzvidzora mwero inonyorovesa nyore mitemo pamwe 1 kana 2 nyika mamaneja.
Tinoedza kusimbisa purogiramu yatinayo yeWorld March pane Facebook neyiyo imwe yechinyorwa chekukurukurirana, kuitira kuti tive nekugadzirisa hutano kuburikidza nechimwe chinhu chakasiyana chinzvimbo chinobatsira kukudziridza maitiro ekubatanidza.
Izvi zvichabvumira zviitiko izvozvi zvinogona kudanwa munzvimbo dzavo nemitauro.
Tichava neine Instagram channel mumutauro weChirungu kuti tipe simba mazera matsva.
Zvishandiso: Tine bhurocha muchiSpanish nzira yekushandura kune dzimwe mimwe mitauro.
Nokuda kwezvatinofanira kufungidzira kuti shanduro itsva ichaitwa muna May / 2019.
Musangano wekupedzisira unotevera kuti ukurukure mazano anotevera ekubatana kwenyika yose
Tinoronga kubata musangano wenyika unotevera munaJune.
Categories Newsletters Kubatikiti kufamba
New Jersey nokuda kweChirongwa cheNyukliya Weapons
Gungwa reMediterranean reRunyararo richava rimwe rematare e2ª World March